Weerar xoogan oo ka dhacay magaalada Anqara ee dalka Turkiga. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Feb 18, 2016 166 0
Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa weerar xoogan oo Qarax ahaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Anqara caasimadda dalka Turkiga, kaas oo geystey khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo aad u farabadan.
Weerarka oo loo adeegsaday Baabuur laga soo buuxiyey walxa Qarxa ayaa ka dhacy goobo Xasaasi ah, waxaana goobta qaraxa ay aad ugu dhawayd xarunta Baarlamaanka iyo dhismaha guud ee ay degan yihiin Ciidanka Militeriga ee Turkiga.
Inta haatan la ogyahay waxaa Qaraxaas ku dhintay 28 Ruux halka 61 kalana ay dhaawac yihiin, waxaana si xoogan qaraxan u cambaareeyey Xukuumadda Turkiga iyo dowladaha ay saaxiibada yihiin.
Rajab Dhayib Ordogan oo habeenkii xalay soo saarey bayaan ayaa sheegay in dowladiisu sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto waxa uu ugu yeerey Argagixisada, isagoona intaa ku daray in Turkigu difaacan doono amnigiisa islamarkaana uusan isu dulleyn doonin cid kale.
Lama oga illaa iyo hadda cidda ka dambeysa weerarkan khasaaraha badan dhaliyey, waxaase xusid mudan in wadanka Turkigu ka howlgalaan kooxo kurdiyiin ah oo aad uga soo horjeeda Xukuumadda Turkiga.
Dowladaha Reer galbeedka iyo kuwa Carabta ayaa aad u cambaareeyey weerarkan khasaaraha dhaliyey, waxaana kamid ah kuwa cambaareeyey dowladda Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Qadar iyo kuwa kale oo badan.